Adama Traore बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
सबैबेल्जियम फुटबल खेलाडीहरूक्रोएसियाई फुटबल खेलाडीहरूडेनिश फुटबल खेलाडीहरूडच फुटबल खेलाडीहरूफ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरूजर्मन फुटबल खेलाडीहरूइटालियन फुटबल खेलाडीहरूपोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरूस्पेनिश फुटबल खेलाडीहरूस्विस फुटबल खेलाडीहरू
मिलान Skriniar बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
रोमन बुर्की बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Goncalo Guedes Childhoood कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Thorgan जोखिम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू Adama Traore बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
अन्तिम अपडेट गरिएको जुलाई 2, 2020
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नाम "Usain Bolt“। हाम्रो अडामा ट्रोर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता प्रस्तुत गर्दछ।
Adama Traore को जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: स्वतन्त्र, खेलकुद, जो र FC - बार्सिलोना
विश्लेषणमा उसको प्रारम्भिक जीवन / पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा / क्यारियर निर्माण, प्रारम्भिक क्यारियर जीवन, प्रख्यातताको बाटो, प्रख्यात कथामा वृद्धि, सम्बन्ध जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक तथ्यहरू, जीवनशैली र उनीबारे अन्य थोरै ज्ञात तथ्यहरू समावेश छन्।
हो, सबैलाई आफ्नो पेशी बनाउने र गति को बारे मा थाहा छ जसले उसलाई फिफा र विश्वको सब भन्दा छिटो फुटबलर बनाउँछ। यद्यपि, केवल केहि विचार गर्नुहोस् Adama Traoreको जीवनी जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Adama Traore बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरूवात गर्दै, उसका पूरा नामहरू अडामा ट्रोरा डायरा हो। अडामा ट्रोरलाई प्राय जसो भनिन्छ उनको जन्म 25th जनवरी 1996 मा उनको आमामा भएको थियो, फातुमाता र बुबा, बाबा ट्रोरा बार्सिलोनाको दक्षिणपश्चिम, L'Hospitalet de Llobregat नगरपालिका मा। उहाँ आफ्ना प्यारा बुबाआमाबाट जन्मेका तीन छोरा मध्ये दोस्रो छोरा र छोरा हुनुहुन्छ।
अडामा ट्रोरे अभिभावकलाई भेट्नुहोस् - उहाँकी आमा (फातुमाता) र बुबा (बाबा)। आईजी लाई क्रेडिट
अडामा टोरोरका अभिभावकहरू स्पेनी आप्रवासीहरू हुन् जसको परिवारको उत्पत्ति / जरा पनी मालीबाट आएको छ, जुन पश्चिम अफ्रिकामा अवस्थित एक भूमिहीन देश हो। केवल टिप ... पश्चिमी अफ्रिकी देश मालीले सहारा मरुभूमिको आधा हिस्सा ओगटेको छ र यो अफ्रिकामा आठौं ठूलो देश हो।
नक्शा माली को मुलुक देखाउँदै- Adama Traore परिवार मूल। छवि क्रेडिट: TheFactFile
अडामा टोरोरका अभिभावकहरूले मालीको देश बार्सिलोनामा बसोबास गर्न छोडे, उनीहरूको विश्वास छ कि उनीहरूका बच्चाहरूले अझ राम्रो अवसरहरू प्रदान गर्नेछन्। यो एक निर्णय थियो जसले भुक्तानी गर्यो।
हुर्केका, Adama Traore केहि फुटबल सितारहरु जस्तै थिएन (जस्तै: लाई मनपर्ने Gerard Pique, मारियो गोजेज र ह्यूगो लेलोरी) जसले स्टारडममा पुग्नु अघि सम्पन्न जीवन बिताए। उहाँ मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, जसको आमा बुबा बच्चाको लागि उनको लागि नयाँ खेलौना सlections्कलन गर्न असमर्थ थियो, केवल एक फुटबल।
अडामा फुटबल प्रेम गर्ने परिवारमा उसको जेठो भाई मोहा र एक राम्री बहिनी आसासँग हुर्किए। बार्सिलोनाको स्पेनी शहरमा हुर्केका, एफसी बार्सिलोनालाई धन्यवाद फुटबलको सुन्दर खेलले उनी र सम्पूर्ण परिवारलाई प्रेम गर्नु स्वाभाविक हो।
Adama Traore बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
खेलप्रति प्रेम अन्य खेलहरूमा प्रबल भयो किनभने अदमाले आफ्नो भाइ मोहसँग सीई एल होस्पिटेलिटको छिमेकी मैदानहरूमा फुटबल खेल्न थाले। त्यसको लगत्तै दुबै दुवैले सेटर डी एस्पोर्ट्स एल होस्पिटेलट क्लबमा फुटबल शिक्षा लिन थाले जुन उनीहरू दुबै अविश्वसनीय प्रगतिमा थिए।
Adama Traore सीई एल होस्पिटेल फुटबल क्लब मा आफ्नो प्रारम्भिक फुटबल शिक्षा प्राप्त भयो। छवि क्रेडिट: BBDFutbool,र जो।
प्रारम्भमा, दुबै भाइहरूलाई उनीहरूसँग प्रतिभा छ भनेर थाँहा थियो र उनीहरू फुटबलबाट ठूलो बनाउन सक्थे। तिनीहरूका अभिभावक र परिवारका सदस्यहरूलाई, मोहा र अडामा सही दिशामा जाँदै थिए भन्ने कुरामा कुनै शंका कहिले भएन। यो अडामा ट्रोर थियो जसले आफ्नो दाजु भन्दा छिटो प्रगति गरे किनभने उनी अधिक प्रतिभाशाली थिए।
वर्ष 2004 मा, Traore परिवार सपनाहरु चुक्ता। एफसी बार्सिलोनाको प्रख्यात एकेडेमी ला मासियाले अडामालाई परीक्षणको लागि आमन्त्रित गर्यो। उनको भाइ मोहलाई छिमेकीले आमन्त्रित गरे दुई वर्ष पछि एस्पनीओल।
Adama Traore बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
छिमेकी सीई होप्सितालेटसँग छोटो अवधिको पछि, सफल परीक्षणले आडामा ट्रोरलाई आठ वर्षको उमेरमा एक्सएनयूएमएक्समा एफसी बार्सिलोनाको प्रख्यात एकेडेमी ला मासियामा भर्ना गरेको देखें।
अडामा ट्रोरको प्रारम्भिक जीवन La Masia- FC बार्सिलोना एकेडेमीको साथ। छवि क्रेडिट: जो
त्यसबेला र वर्तमानमा, यो लासियामा सम्मिलित हुने सबै बच्चाहरूको सपना थियो, विश्वको सबैभन्दा ठूलो फुटबलि acade एकेडेमीहरू मध्ये एक हो। सामेल भए पछि यो सानो अडामाको लागि रमाईलो थियो। कडा प्रतिस्पर्धाको साथ भेट्न, उसले धेरै त्यागहरू गर्नुपर्‍यो जस्तै हराएको जन्मदिनहरू र चीजहरू जुन उनी घर पर्खिरहेका थिए। क्लबसँग छिटो प्रभाव पार्नको लागि यी सबै बलिदानहरू आवश्यक पर्दछ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… वर्ष (2004) जुन Adama ला मासियामा सामेल भयो वर्षको साथ मेल खान्छ लिओनेल मेस्सी सीनियर फुटबलको दृश्यमा विस्फोट भयो। त्यस पछि, Adama अन्य बच्चाहरु संग सबै आफ्नो बालकता नायक AKA को पदचिन्ह अनुसरण ला पुल्गा (GOAT).
Adama Traore बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
ला मासियाको साथ सडकमा अड्माले एकेडेमी क्रमशः यात्रा गर्दा प्रगति देखाउन छोडे। छोटो भए पनि उसको शक्ति, शक्ति र बिजुलीको गतिले उसलाई युवा स्तरमा प्रख्यात बनायो। तपाईंलाई थाँहा थियो? अडामा ट्रोरले उपनाम कमायो 'Usain Bolt'बार्सिलोनामा मा आफ्नो formative वर्षहरु को दौरान आफ्नो विस्फोटक गति को कारण ला Masia अकादमी
अडामा टोरेर विपक्षीहरूको साथ खेले जुन भन्दा पनि ठूलो र ठूलो थियो। क्रेडिट FC - बार्सिलोना
किनभने उहाँ त्यो राम्रो हुनुहुन्थ्यो, अडामा प्रायः उच्च उमेर समूहका विपक्षीहरूका विरूद्ध प्रयोग हुन थाल्यो र उसको भन्दा पुरानो खेलाडीहरूको विरुद्ध फल्छ। उहाँ दुबैलाई दायाँ-पछाडि र आक्रमणकारीको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो जब उहाँ ला मासियामा हुनुहुन्थ्यो।
जबकि अन्य बच्चाहरूलाई प्रदर्शनको कमीको कारण अत्यधिक प्रतिस्पर्धी ला मासिया एकेडेमीमा राखिएको थियो, अडामा ट्रोर आफ्नो कामलाई आफ्नो जागिर बनाउनमा राम्रो थिएन। तल भिडियो प्रमाणको एक टुक्रा छ जुन ला मासियामा उनको समयमा फुटबल उन्मादको अद्भुत प्रदर्शन देखाउँदछ। एयरफुटबोललाई विशेष क्रेडिट।
Adama Traore बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
वर्ष 2013 मा, Adama Traore बार्सिलोना बीको साथ नियमित भयो, जुन पक्षको लागि 40 लिग भन्दा धेरै देखीरहेको थियो। उसले बार्सिलोना बी टीमलाई 2014 यूईएफए युवा लिग जित्न सहयोग पुर्‍यायो।
अदमा ट्रोर टीमका साथीहरूसँग यूईएफए युवा लिग मनाउँदै। छवि क्रेडिट: टकस्पोर्ट्स
उही वर्ष, अडामाले उनको पेशेवर पदार्पण एफसी बार्सिलोना वरिष्ठ टीमसँग गरे नेमार एक La Liga जीत मा। उनको एफसी बार्सिलोना टीम बीमा र उत्कृष्ट टीम सुरुमा उनको प्रभावशाली प्रदर्शनको कारण, सम्पूर्ण यूरोपभरका क्लबहरू उनको हस्ताक्षरको पछि लाग्दै आए।
14 अगस्त 2015 मा, अडामा ट्रोरी प्रीमियर लिग क्लब एस्टोन भिलामा सामेल भए र एक बर्ष पछि मिडल्सबरो जहाँ उनले आफ्नो प्रयोग जारी राखे शान्ति विपक्षी रक्षकहरूको लागि धेरै समस्याहरू निम्त्याउने। बोरोका साथ अडामा ट्रोरको सर्वश्रेष्ठ खेल सफलता प्रख्यात भएपछि ह्याट-ट्रिक पुरस्कार जुन हो; “(1) मिडल्स्ब्रु फ्यानहरूको वर्षको प्लेयर, (2) मिडल्सब्रूको लागि युवा प्लेयर अफ द इयर (3) मिडल्स्ब्रुको प्लेयर अफ द इयर।
Adama Traore एक मिडल्स्ट्रु अवार्डको साथ प्रस्तुत गर्दै। क्रेडिट मिडल्सब्रू आधिकारिक वेबसाइट
मिडल्सबरोमा अडामा ट्रोरीको सफलताले वोल्वरहैम्प्टन वान्डरर्सलाई आकर्षित गर्‍यो जसले उनलाई किन्न उस्को आँखा चिम्लेन। उसको कोच, Nuno Espírito सान्तो प्रतिरोधको थकित खुट्टालाई दण्ड दिनको लागि काउन्टर-एट्याक्स मार्फत आफ्नो गति र शक्ति प्रयोग गर्ने आफ्नो अभियानमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्‍यो।
अडामा ट्रोरे- थकाइएका विरोधीहरूलाई दण्ड दिन गेम हतियारको अन्त्यको रूपमा प्रयोग गरियो
एउटा अविस्मरणीय नोटमा, अड्मा ट्रोरको गति र शक्ति अधिकतम अक्टूबर6को 2019th मा ट्याप गरियो। त्यो दिन थियो जब अडामाले घेरा हालेका थिए पेप Guardiola'हार्डकोर म्यान सिटी टीम' जब उनले टाढाको विजयमा दुई गोल गरे (0-2), एउटा त्यस्तो उपलब्धि जुन उसको पेशेवर क्यारियरको सबैभन्दा ठूलो हाइलाइट हो।
त्यस दिन अडामा ट्रोरले म्यान सिटीलाई दण्डित गर्‍यो। क्रेडिट 90Min
अब कुनै श doubt्का बिना, अडामाले फुटबल प्रशंसकहरूलाई विश्वास दिलाउँदछ कि गति र शक्ति आधुनिक समयका फुटबलरको रूपमा आवश्यक एक शर्त हो। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो.
Adama Traore बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
विशेष गरी फिफामा उनको ख्याति र लोकप्रियतामा बढ्दै, धेरै प्रशंसकहरूले आदामा ट्रोरको प्रेमिका वा पत्नी छ कि छैन भनेर थाहा पाएर चिन्तित भएका छन्। कुनै श doubt्का बिना, उसको शरीरिक र राम्रो देखिन्छ निश्चित पक्कै धेरै महिला प्रशंसकहरु को लागी उनी प्रेमी चाहना को सूची मा हुनेछ।
Adama Traore प्रेमिका को हो? आईजी लाई क्रेडिट
लेख्ने समयमा, हामीले पत्ता लगायौं कि अडामाको प्रेमिका भएको वा कुनै सम्बन्धमा संलग्न भएको कुनै चिह्न छैन। के देखिन्छ, उसले आफ्नो फुटबल क्यारियरमा ध्यान केन्द्रित गर्न रुचाउँछन्। यद्यपि हामी उनीहरूको क्यारियरको महत्त्वपूर्ण चरणहरूमा कम रहन धेरै युवा फुटबलरहरू यस्तै व्यवहार गर्दछौं। यो पनि हुन सक्छ कि आडामाको एक प्रेमिका छ तर उनको सार्वजनिक सम्बन्धको लागि कम्तिमा अहिलेको लागि नमान्नु राम्रो हुन्छ।
Adama Traore बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
अडामा ट्रोरको व्यक्तिगत जीवनलाई टाढाबाट चिन्न तपाईंले उसको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुरूवात गरेर, अडामाको पहिलो हेराईमा, तपाईंले केही दमदार र अशांत चीजको सुरुवात महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। पिच बन्द, उसले आफ्नो जिम कसरत विशेष ध्यान दिन्छ, महत्वपूर्ण मांसपेशियों को द्रव्य र फिजिक को एक कारण।
संग एक साक्षात्कार मा ब्रान्ड, Adama विपरीत दाबी, कि उहाँ एक वजन लिफ्टर छैन। उसको शब्दमा; “मैले एउटा तौल पनि उठाएको छैन। मलाई थाहा छ कि मानिसहरूले यसलाई विश्वास गर्दैनन्, तर यो सत्य हो। ”। प्रश्न यो छ; Do तपाईं जो यो लेख पढ्दै हुनुहुन्छ विश्वास गर्नुहुन्छ कि उसले के भनेको थियो जसरी तपाईं उसको यो फोटोलाई 17-वर्षीय फुटबलरको रूपमा लिनुहुन्छ?…
17 वर्ष पुरानो फुटबलरको रूपमा अडामा ट्रोरको फोटो। छवि क्रेडिट: ट्रोलफुटबल
दोस्रो: आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, अडामा ट्रोर एक त्यस्तो व्यक्ति हो जससँग सधै संसारको लागि केहि चीज हुन्छ र त्यो "बाहेक अरु कुनै कुरा हुँदैन"गति"उनले फुटबलको खेल ल्याउँछ। तपाईं ऊ को श्रेणी मा हुन सक्छ Messi र सी रोनाल्डो, तर अडामा ट्रोरले महानताको आफ्नै संसार सिर्जना गरेको छ FIFA18 पुरस्कार। भिडियो प्रमाण (तल)।
Adama Traore बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
स्पेनमा बसोबास गर्ने लगभग 55,000 मालिअन आप्रवासीहरु मध्ये (ईफे रिपोर्टहरू), Adama Traore को परिवार केहि सफल हो जसले आफ्नो नाम बनाएका छन। परिवारको लागि जम्मा भइरहेको छ एक अर्थको रूपमा फुटबल प्रयोग गरेर वित्तीय स्वतन्त्रताको लागि आफ्नै मार्ग फोर्जिंग।
Adama Traore बुबा: उसको बुवा जसलाई केवल उपनाम द्वारा संदर्भित गरिएको छ "डायन"पुर्खा द्वारा शुद्ध मालिअन हो। जब तपाईं आफ्नो छोरासँग तल चित्रमा देख्नुहुन्छ, एउटा कुरा दिमागमा आउँछ। यो दुबै बुबा र छोराको शरीर संरचना हो। (ती मांसपेशिहरु बनाउँछ!)। तपाईं सजिलैसँग यो निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ कि अडामाले आफ्नो बुबाको शरीरमा बनाएको पछि हो।
Adama Traore बुबा संग पोष्ट गर्दछ। क्रेडिट: आईजी
बाबा फुटबलको क्याटालोनिया कारखानामा हुँदा धेरै राम्रा बाबाले आदमलाई सहयोग पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याएका थिए।
Adama Traore आमा: फातुमाता उनको नाम हो र उनी प्राय: भनिन्छसहयोगी आमा'। उनको छोरा अदमाका अनुसार; "मेरो आमा सधैं सहयोगी हुनुहुन्छ, मलाई चारै तिर ड्राईभ गर्दै र युवा खेलाडीको रूपमा मलाई उठाउँदै। त्यो दिन उहाँ मसँग हुनुहुन्थ्यो, मलाई समर्थन देखाउँदै, जुन दिन मैले ब्वाँसका लागि हस्ताक्षर गरें। "
Adama Traore उसकी आमा संग। क्रेडिट: आईजी
माथीको फोटोबाट हेरेर तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ कि प्रेम र मायालु कोमलता दुबै अडामा र फातुमाताबीच रहेको छ, जसले उनीहरूको मुटुको अन्य सबै स्नेहलाई पार गर्दछ।
Adama Traore बहिनी: तल आसामाको सुन्दर बच्चा बहिनी छ जो आसा नामबाट जान्छे। उनी लेख्ने समयमा स्पेनमा बस्छिन् र धेरै पटक इ England्गल्यान्डमा उनका ठूला भाइलाई भेट्न आउँछिन्।
अडामा टोरेरे आफ्नी बहिनी आसासँग पोज गरीन्। क्रेडिट: आईजी
Adama Traore भाई: मोहम्मद ट्रोरा डायरा जो उपनामको साथ पनि परिचित छ "मोहा"अडामाको जेठो दाइ हो। मोहा (जन्म 29th नोभेम्बर 1994) जो अडामा भन्दा दुई बर्ष जेठो छन् एक पेशेवर फुटबलर पनि बने।
Adama Traore भाई- Moha भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: Nkistra। आईजी लाई क्रेडिट
आफ्नो परिवारको जरामा निष्ठा भुक्तान गर्ने तरिकाको रूपमा, मोहा फेब्रुअरी 17 मा 2014th मालीको लागि स्पेनमा खेल्न स्विचबाट स्विच गरे। लेख्ने समयमा, उनी हाल सेगुंडा डिभिजन बीमा स्पेनिश क्लब हर्कुलसका लागि एक फरवार्डको रूपमा खेल्छन् जुन स्पेनी फुटबल लीग प्रणालीको तेस्रो स्तर हो।
Adama Traore बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली
कमाउने फुटबलरका लागि 2.6 मिलियन यूरो (2.2 मिलियन पाउन्ड) प्रति वर्ष लेखन को समयमा, त्यहाँ एक सामान्य जीवन को लागी पर्याप्त पैसा छ। अडामा टोरेरको वित्तीय सफलता फुटबलरको रूपमा उसको प्रदर्शनसँग प्रत्यक्ष बाँधिएको छ।
धेरै पैसा कमाउने एक विदेशी जीवन शैली बाच्न को पार छैन जो सजिलैसँग सजिलैसँग सजिलै देख्न सकिन्छ जो ठूला हवेली र फ्ल्यास कारहरू प्रदर्शन गर्दछ। अडामा उनले आफ्नो वित्तीय प्रबन्ध गर्ने तरीकाको बारेमा चतुर छ। उसले एक औसत कार ड्राइभ गर्दछ र एक फुटबलर को लागी औसत जीवन शैली।
अडामा ट्रोर लाइफस्टाइल तथ्यहरू। छवि क्रेडिटहरू: सीएनबीसी, आईजी र अरबी व्यापार। ट्विटरमा क्रेडिट
Adama Traore बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
आफ्नो क्यारियर मा न्यूनतम पल: जनवरी 2016 उनको क्यारियर को एक खराब क्षणहरु को रूप मा रेकर्ड छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… अनुशासनहीनताको बारम्बार घटनाका कारण अड्मा ट्रोरलाई एस्टोन विला वरिष्ठ टीमबाट हटाइयो। यो निर्णयले उनको टोलीमा नकरात्मक प्रभाव पा .्यो किनकि उसको पक्ष अ season्ग्रेजी शीर्ष उडानबाट thatतुको अन्त्यमा रिलीग गरिएको थियो।
उसको राम्रो सीभी छ: धेरै फुटबल फेम फिफा र पक्कै पनि ब्ल्भ्स खेलिरहेको बेला अडामा टोरोर भरिभयो। सत्य यो हो कि द्रुत र शक्तिशाली फुटबलरले आफ्नो सीभीबाट देखेका धेरै लामो दूरीमा आइसकेका छन जुन उनको उपलब्धिको मात्रा भन्छ।
Adama Traore अनटाल्ड क्यारियर सम्मान को संख्या।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Adama Traore बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य पढ्न को लागी धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
बार्सिलोना फुटबल डायरी
Wolverhampton फुटबल डायरी
Ferran Torres बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
मार्कोस लोरेन्टे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
मारियानो डियाज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
डानि ओल्मो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
डेनियल परेजो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
रोड्रिगो मोरेनो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Ansu Fati बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
डानी सेबललोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
यसका लागि उनीहरुसँग भेटघाट गर्दछन्
इकर क्यासिलास बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जेरार्ड डीलुफू बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: जुलाई १,, २०१।
परिमार्जित मिति: जून १,, २०१।
मानुएल आकानजी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Pedro Rodriguez बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
फर्नोन्डो टोरास बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्याङ्क
मार्को एसेन्सियो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य
डेभिड डी जीए बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
हेक्टर बेलरिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य